မြန်မာဟာသများ စုစည်းမှု ( ၂ ) - News-Myanmar
» မြန်မာဟာသများ စုစည်းမှု ( ၂ )
မြန်မာဟာသများ စုစည်းမှု ( ၂ )
Written By Åüñg Kÿáw Sôë on Friday, July 27, 2012 | 10:09:00 PM
by ချစ်ကို ကို
ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ကို ရည်စားစာလိုက်ပေးလေသည်
ကျေနပ်ပြီ ကောင်လေး ပြန်သွားလေသည်..........နောက် ၃ရက်ကြာတော့ အဖြေ ပြန်လိုက်
ထပ်တောင်း သည်.....ဟိုကထပ်ပြော သည်..”ဖတ်ဆဲပါပဲ”တဲ့.......၃ခါမြောက် သွားတောင်း
တော့လည်း ထိုနည်၎င်းပြောသည် ကောင်မလေးကိုမေးလိုက်သည်.....မင်းဟာက ဒီတစ်သက်
ဖတ်လို့ ပြီးအုံးမှာလား....ဆိုတော့ ကောင်မလေးက ”ဟုတ်တယ်လေ....အကို့စာကို ညီမက..
ဖတ်လိုက်ရင် ဆဲလိုက်ရင် မကျေနပ်လို့ ဖတ်လိုက်ရင် ထပ်ဆဲလိုက်ရင်းနဲ့
by Maggie Degrew
အဲစုံတွဲကလည်းခပ်ကဲကဲဆိုတော့ လူကြားသူကြားမရှောင်ပလူး အဲ
kgmalayကမောင် ချစ် ဒီနားနာတရ်ဆိုပီး လက်ဖမိုးလေးကိုထိုးပြလိုက်တရ်။
kglayကဟုတ်လားဆိုပီး လက်ဖမိုးလေးကိုရှလွတ်ဆိုပီးနမ်းလိုက်ရော နောက်
kgmalay ကထပ်ပီးတော့ နံဖူးနာတရ်ဆိုပီး ပြောလိုက်တော့
အဖွားကြီးက အဲလိုရှလွတ်နေတဲ့ အတွဲကို မကြည့်ချင်လည်းမြင်နေရတာပေါ့။
အဲတော့ အဖွားကြီးက ပထမတော့အမှုမဲ့အမှတ်ဘဲနောက်တော့
တခုခုကိုအတွေးပေါက်သွားသလိုဖြစ်ပီး kglayကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တရ်။ လူလေး
လူလေး....... အဲတော့kglay ကလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ 'လူလေးရယ်
အဖွားကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပါ' ဆိုပီးပြောတော့ kglayက 'အော
ုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲ' လို့ပြန်မေးလိုက်တရ်။ အဖွားကြီးက 'လူလေးရယ်
မင်းက တအားအစွမ်းထက်တာဘဲ မင်းနမ်းလိုက်တိုင်း နမ်းလိုက်တိုင်း
ဒေါသထွက် ရန်ဖြစ်သည့်အခါတိုင်း ပန်းကန်တွေကို ပေါက်ခွဲတတ်သော
ဇနီးဖြစ်သူနှင့် အိမ်ထောင်သက် အနှစ်၂၀ အရောက်တွင် ကွာရှင်းဖို့
ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ မိတ်ဆွေများက ယောကျာ်းဖြစ်သူကို ဝိုင်းတားကြသည်။
“နှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းလာပြီးမှ ဆက်ြပီးသည်းခံလိုက်ပါကွာ။ မင်းမိန်းမ
အကြောင်းလည်း သိနေတာပဲ။ ”
“မင်းတို့ဘာသိလို့တုန်းကွ။ ငါ့မိန်မက တစ်ဖြေးဖြေး လက်တည့်လာပြီ။ ”
ဘွ့ဲရပြီးခါစ ကျောင်းဆရာပေါက်စ အတွေ့ ကြုံလေးပါ ၊ သိကြတဲ့ အတိုင်း
ကျောင်းဆရာ ဖြစ်စဆိုရင် မြို့ ပေါ်တွေမှာ တာဝန်မကျပဲ .ဟိုအဝေး
နယ်စပ်တောင်ပေါ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားရွာလေးမှာ တာဝန်ကျတာပေါ့.. ကျောင်းဆရာလေး
ရောက်တဲ့ရွာလေးက မြန်မာစကား သိပ်မပြောတတ်ကြဘူး ဒီလိုနဲ့ရွာလေးရောက်တော့
ကျောင်းဆရာလေး ရွာက ကလေးတွေကို စာသင်ရတာပေါ့..အဲ့မှာ စပါလေရော..သူသင်ရတာ
၃ တန်း ၊ ၄ တန်း ကလေးတွေ စာသင်ပေးရတာ အခက်အခဲ မရှိပေမယ့် သူတို
့ကစကားပြောရင် ကြီးကြီး ငယ်ငယ် နင် နဲ့ငါ နဲ့အဲ့လိုပြောကြတာ..ဆရာလေး
နားမှာ ကြားရတာ တမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ စာနားမလည်လို့ထ မေးရင်တောင် နင်
ခုနပြောတာ ငါ နားမလည်ဘူး ပြန်ပြော ဒီလို၊ဆရာလေးက စာထမေးတဲ့ ကလေးကို
ဆုံးမတာပေါ့ ...... ဒီလိုမပြောရဘူးတပည့် ရ ဆရာ ကျွန်တော် နားမလည်လို့ 
ဒါလေးပြန်ရှင်း ပြပါ အဲ့လို
ပြောရတယ်........ပြောတော့ ကျောင်းသားက ဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်လဲ..အို့ 
နင်ပြောသလို ငါမပြောတတ်ဘူး ငါဒီလိုပဲ ပြောတတ်တယ် လို့ ပြန်ပြောတာ
ဆရာပေါက်စ ခုမှခက်ပြီ ..ဒီကိစ္စပြေ လည်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ
..ဟုတ်ပြီကျောင်းသားရဲ့မိဘတွေကို ဆုံးမခိုင်းရမယ် ဒါအကောင်းဆုံးပဲ
ဒီလိုနဲ့ခုနကျောင်းသားကို မင်းမနက်ဖြန် ကျောင်းလာရင် ဆရာ့ဆီကို
မင်းမိဘ ခေါ်ခဲ့ ကြားလား …ကျောင်းသားက အေး နင် တွေ့ ချင်ရင် ငါ
ခေါ်ခဲ့မယ်..ဒီလိုနဲ့ နောက်နေ့ ရောက်တော့ ဆရာလေးလဲ သူ့ စားပွဲမှာ
အလုပ်လုပ်နေတုန်း အခန်းဝကို မနေ့ က ကျောင်းသားလေး လူကြီးတစ်ယောက် ခေါ်ပြီ
ရောက်လာတယ် ကျောင်းသားက ဆရာကို ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ဆရာလေး ပါးစပ်
အဟောင်းသားနဲ့ဘာပြန်ပြောလို့ပြောရမှန်း မသိအောင်ကို
ဖြစ်သွားတယ်..ကျောင်းသား ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ် မှတ်လဲ… သူပြောလိုက်ပုံက သူ
့ဘေးကသူကို လက်ညှိုးထိုးပြီ ဟေ့ကောင်ဆရာ….မင်းတွေ့ချင်တဲ့…ငါ့အဖေဆိုတာ
ဒီကောင်ပဲ ကွ တဲ့ သေပြီဆရာ......... အဖေ တောင် ဒီကောင်လို့ ခေါ်တာ ငါ့ကို
မင်းနဲ့ ငါ ပြောတာ တော်သေးတာပေါ့.ဟဲ ဟဲ
by San Ci Paw
မြို့လေးတစ်မြို့မှာရှိတဲ့ ဘား ဆိုင်ထဲကိုလူစိမ်းတစ်ရောက်ဝင်လာတယ်ဗျ...
လူစိမ်းဆိုတော့လဲ ဆိုင်ထဲကလူတွေက ကျိတ်ရှိုးလေးရှိုးကြတာပေါ့
အဲ့ဒီလူက အေးဆေးအထာမျိုးနဲ့ ခုံမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့ အရက်မှာလိုက်တယ်...
''' ၀ီစကီ နှစ်ပတ် နှစ်ပတ် နှစ်ပတ်...သုံးခွက်ပေးပါ."""
ဆိုင်ရှင်ရော ဆိုင်ထဲကလူတွေပါ ဘာလဲဟ ဆိုပြီး ၀ိုင်းကြည့်တာပေါ့
အဲ့ဒီလူက ဘာမှ မပြောပဲနဲ့သူဟာသူသောက်စရာရှိတာသောက်ပြီးလစ်သွားတယ်
ဒီလိုနဲ့ ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်နေတော့ဆိုင်ရှင်က မနေနိုင်မထိုင်နိုင် စပ်စုပါလေရော
""" နေပါဦးဗျ...ခင်ဗျားက ၀ီစကီကို တစ်ခွက်ထဲသောက်ရင်လည်းရရဲ့သားနဲ့
ဘာဖြစ်လို့ သုံးခွက် သုံးခွက် မှာမှာသောက်တာတုန်းဗျ"""
အရက်သမား ------ ဒီလိုဗျ..ကျွန်တော့်မှာအကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျ
ဆိုင်ရှင် ----- သြော်....ဟုတ်လား...&^$#$(&^%#@
အရက်သမား -- ၀ီစကီကို နှစ်ပတ် နှစ်ခွက်ပဲပေးပါတော့ဗျာ....
ဆိုင်ထဲကလူတွေရော..ဆိုင်ရှင်ပါ အံသြသွားတယ်...အားလုံးထင်ကြတာက သူ့အကိုတစ်ယောက်
ဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်က အရက်ခွက်သွားချရင်းနဲ့ "''
အရက်သမား ----- အင်...ကျုပ်အကိုက ဘာဖြစ်နေလို့လဲဗျ
ဆိုင်ရှင် ----- ခင်ဗျားအကိုဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးလား
အရက်သမား -- ဘာလို့ဆုံးရမှာလဲဗျ..အိမ်မှာအကောင်းကြီး....
ဆိုင်ရှင် -- နေပါဦးဗျာ..ဒါဆိုခင်ဗျားက ဘာလို့ဒီနေ့မှ ၀ီစကီကို
အရက်သမား ------ သြော်ဒါလား....ဟင်းဟင်း...ဒီလိုဗျ..ကျွန်တော်ကအရက်ဖြတ်လိုက်ပြီလေ..
ဒီသောက်နေတဲ့ခွက်တွေက ကျွန်တော့အကိုတွေအစားသောက်ပေးနေတာပါတဲ့ ကဲ...။
မြန်မာဟာသမှ ယမကာ ချစ်သူများအား ဂုဏ်ပြုလျှက်...........။
by Myo Min
တစ်နေ့ ရွာဘုရားပွဲတွင် ဟောဒီမှာကြည့်မေလိ၊ ကျပ်မပြည့်မတ်စိ၊
ရာစုနှစ်အလှရှင်တီကေ နှင့် ဖြုတ်စူးတို့ ကာရာအိုကေသွားဆိုကြတယ်။ အဲဒီမှာ
မေလိ၊ မတ်စိ နဲ့ တီကေတို့က အန်းဒိတ်တွေပီပီ
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်သီချင်းတွေကို ဆိုတယ်။ ဒီတော့ ဖြုတ်စူးကလဲ အားကျမခံ
1999(နိုင့်တီနိုင့်တိနိုင်း) ဆိုတဲ့သီချင်းကျရော။ သူကလဲ စာသားက မရ။
မရဘူးလို့ပြောရင်လဲ အရှက်က ကွဲဦးမယ်။ ဒီတော့ အားကျမခံ
အစကတော့ ချောနေတာပဲ။ အဲ… “1999… ကိုယ်ကိုယ်ရေ အတူတူနေမယ်…”
“ထောင့်ကိုးရာ့ကိုးဆယ့်ကိုး… ကိုယ်ကိုယ်ရေ အတူတူနေမယ်”…
အီဘိုလာ ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့သူများအား မြေမြုပ်နေစဉ် လူသေကောင်များက ပြန်လည်အသက်ဝင်လာ
-- -- -- ---------------------------------------------------------------------------------- "ဇန်ဘီ " __________...
သတိထားစရာ Photo post and link - Facebook Wall Post Mobile Phishing and Auto Spammer
- - - - ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ ကာတွန်းပုံလေးနဲ့ မူရင်းပုံလေးနဲ့ တွဲပြထားပြီး www.site.google.com/name လိုပုံစံမျိုးတို့www.name.blo...
The only thing necessary for the triumph of Evil Islamization is …..for good men to do nothing.
နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော် အတွင်း မွတ်ဆလင်တို့ ဧ။် ကျူးကျော် သတ်ဖြတ် ၊လူမျိုးတုံး ၊ဘာသာ၊ယဉ်ကျေးမှုတုန်း စစ်ပွဲ များစွာထဲမှာ…. ...
Root APK အမိုက်စားလေး ♨ SuperSU.APK♨ Root APK အမိုက်စားလေး SuperSU အားလုံးသိကြမှာပါ ... ဖောက်ချက်ကတော့9​လောက်​ရှိတယ်​ . marketing ...
ဖြူပါစေ . မဲပါစေ . တုတ်ပါစေ . ၀ပါစေ . ပုပါစေ . သေးပါစေ။ မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်စားပြုပြီဆိုရင် အားပေးမယ်။ ဗိုဒ့်ကြပါဗျို့ မြန်မာပြည် လူသန်းေ...
AFC U19 Championship 2014 Myanmar - Latest Results & Next Match ------------------------------------------------------------------------------------ =========================== Group - A ============...
Search for Two Missing Mountaineers Continued By the HTOO Foundation Monday, 20 October 2014 07:52	U Tay Za, patron of the HTOO Foundation requestedaJapanese mountaineering team, which will scale M...
အသိနောက်မှာ သတိတွေကပ်ပီး အမျိုးဘာသာသာသနာ အတွက် ကျရာတာဝန် ထမ်းရွက်ကြပါစို့ .....
ကျနော် အပိုမပြော ပါဘူး ဒါဟာ တောင်ဒဂုံ ၁၀၄ ရပ်ကွက် က ပြည်သူတွေ ရဲ့ အမျိုးဘာသာသာသနာ စောက်ရှောက် တဲ့ စိတ်တွေပါ မိမိတို့ ဘာသာဟာ တြ...
The ordeal of the Thai Pilot, Myanmar Pilot and HTOO Foundation’s Patron U Tay Za’s personal assistant U Shwe Yin Taw Gyi after B-4 Helicopter accident
September 27th, 2014 (around 14:00 hour) HTOO Foundation’s patron U Tay Za was expecting for the arrival of the Thai B-4 helicopt...